Mhuri yaNoa Inopona paMafashamo Makuru | Zvidzidzo zveBhaibheri Zvevana
Vanhu 8 Ndivo Vakapona
Noa nemhuri yake, pamwe chete nemhuka vakapinda muareka. Jehovha akavhara dhoo uye kwakabva kwatanga kunaya. Kwakanaya zvekunaya zviya, areka yacho ikatanga kuyangarara pamusoro pemvura. Nyika yese yakasvika pakuzadzwa nemvura. Vanhu vese vaiita zvakaipa vakafira kunze kweareka. Asi Noa nemhuri yake vakanga vakachengeteka vari muareka. Fungidzira kufara kwavakaita nekuti vakateerera Jehovha!
Mvura yakanaya kwemazuva 40 neusiku 40, ichibva yazomira. Zvishoma nezvishoma mvura yaiva panyika yakatanga kudzikira. Areka yacho yakabva yazonogara pamusoro pemakomo. Asi mvura yakanga ichakazara kwese kwese, saka zvakanga zvisati zvava kuita kuti Noa nemhuri yake vabude muareka.
Mvura yacho yakabva yatanga kuserera zvishoma nezvishoma. Noa nemhuri yake vakapedza nguva inopfuura gore vari muareka. Jehovha akabva avaudza kuti vabude muareka vachipinda munyika yakanga isisina vanhu vakaipa. Vakatenda chaizvo kuti Jehovha akanga avaponesa, uye vakaratidza kutenda kwavo nekupa chibayiro kuna Jehovha.
Jehovha akafara chaizvo nechibayiro chacho. Akabva avimbisa kuti haachazoparadzizve zvinhu zvese zviri panyika achishandisa mafashamo. Akaita kuti pave nemuraraungu wekutanga kuti uve chiratidzo chezvaakanga avavimbisa. Wakamboona muraraungu here?
Jehovha akaudzawo Noa nemhuri yake kuti vave nevana uye vazadze nyika.
‘Noa akapinda muareka, uye vanhu havana kucherechedza kusvikira Mafashamo auya akavakukura vese.’​—Mateu 24:38, 39
Mibvunzo: Chii chakaitika Jehovha paakavhara dhoo reareka? Muraraungu unotiyeuchidza nezvei?
Noa nemudzimai wake vakasangana nematambudziko api pakurera vana vavo? Vakaratidza sei kutenda pakuvaka areka?